नेता ज्यु ‘बुद्धिहीन’ भन्दै मुसहरहरूलाई किन हपारेकाे ? — Samyantra.com
गृहपृष्ठ » मुख्य खबर → नेता ज्यु ‘बुद्धिहीन’ भन्दै मुसहरहरूलाई किन हपारेकाे ?
नेता ज्यु ‘बुद्धिहीन’ भन्दै मुसहरहरूलाई किन हपारेकाे ?
November 13, 2017१४४ पटक
विराटनगर / नेपाली काग्रेंसका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नम्वर ६ का उमेदवार डा. शेखर कोइरालाले मुसहर समुदायलाई ‘बुद्धी नभएको’ भन्दै हपारेका छन् ।
निर्धारित समय भन्दा दुई घण्टा ढिलो गरेर कार्यक्रममा पुगेका कोइरालाले मन्तव्य व्यक्त गरिरहँदा चित्त नबुझेर हल्ला गरेपछि डा. कोइरालाले बुद्धि नभएकाहरु भन्दै गाली गरेका हुन् । यस अघि दुई पटक संसदमा निर्वाचित भइसकेका कोइरालाले त्यस क्षेत्रको विकास तथा विपन्नहरुको पक्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेपछि रुष्ट जनतालाई फकाउनुको साटो उल्टै हप्काएपछि आक्रोश बढेको छ ।
आइतवार बुढिगंगा गाउँपालिका अन्तरगत टंकिसिनुवारीमा ऋषिदेव उत्थान समाजले उमेदवारहरुसंग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा दुई घण्टा ढिलो गरेर मात्र कोइराला पुगेका थिए । लामो प्रतिक्ष पछि पुगेका कोइरालाप्रति करिव विश्वास टुटिसकेपछि समाजको कार्यक्रम भएकोले उनीहरु धैर्यताका साथ बसेका थिए । दश वर्ष अघि भन्दा आश्वासनका पोकामा खासै भिन्नता नपाएपछि महिलाहरुले हल्ला गर्न थाले । हल्लाले भाषण प्रभावकारी नभएपछि कोइरालाले भने ‘यस्तै बुद्धिले गर्दा पछाडी परेको हो’ भन्दै उनले गाली गरे । त्यसप्रति आयोजकहरुसमेत रुष्ट देखिएका थिए यद्यपी उनीहरुले कार्यत्र mम स्थलमै कुनै अप्रीय कदम अघि बढ्न भने दिएनन् ।
दश मिनेट बोल्छु भनेका डा. कोइराला आफ्नो भनाई ५ मिनेटमा छोट्याएर बाहिरिए । बुढीगंगा गाउँपालिका – २ सख्माका रीता ऋिषिदेवलाई आफ्नो बस्तीमा बिजुली आएको देख्ने रहर छ । उमेर ढल्किसके पनि गाउँमा विकास होस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसैले उनी भाषणमा होइन काम गर्नेलाई भोट दिने पक्षमा छिन् ‘तर डा. साप्ले १० वर्षमा नगरेको काम गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छैन ।’ ‘जिल्लाका सबै बस्तीमा यातायातको सुविधा पुग्दा यहाँ अहिलेसम्म सडक निर्माणको काम अधुरो छ,’ ऋिषिदेव उत्थान समाजले मोरङको ६ नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको उम्मेदवारलाई एकै थलोमा भेला पारी आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनिन, ‘गाउँमा अझै बिजुली पुगेको छैन । टुकीको साहारामा रात काटुपर्छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘यसपालिको चुनावमा विकास गर्ने पार्टीका इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउन चाहन्छौं ।’ करिब २५ घर परिवार ऋषिदेव सामुदाय सखमा बस्तीमा छन् । यहाँ झन्डै ३ सय जनसंख्या छ ।
कार्यक्रममा उपस्थीति भएका दिपक ऋषिदेवले भने, ‘भोट दिएर जिताउनुहोस् बाटो ल्याइदिन्छु, बिजुली ल्याइदिन्छु र खानेपानी योजना पारिदिन्छु,’ उम्मेदवारको आश्वासन यस्तै छ, उनले भन,े ‘जितेपछि कामै गर्दैनन् ।’ यहाँ मोटर र बिजुली केही छैन । गाउँको विकास गरिदिन्छौं भनेर नेताले भाषण मात्रै गरेको उनले सुनाइन् । ‘यसपालिको चुनावमा गाउँको विकास गर्नेलाई मात्रै भोट दिने उनले बताए । भन्छन् ‘हामीलाई पनि मोटर चढने रहर छ, बिजुली बत्ती बाल्ने चाहना छ ।’ ऋषिदेव सामुदायको कार्यक्रममा वाम गठवन्धनका उमेदवारहरु लालबाबु पंडित र जीवन आचार्य निर्धारित समयमै पुगेका थिए । उनीहरुले लामै अन्तरक्रिया गरेर समस्या समाधानमा पहल गर्ने बाचा गरे ।
नेता लालबाबु पण्डितले गरिव जनताको समस्या बुझने पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भएको बताए । उनले यस पटकको प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनलाई बहुमतले बिजयी गराएर बहुमतको स्थायी सरकार बनाउने बताए । उनले गठबन्धनको स्थायी सरकार बनेपछि सिंचाई, कृषि क्षेत्रको विकास, शिक्षा तथा हुलाकी राजमार्ग र पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने बताए । त्यस्तै सोही निर्वाचन क्षेत्रका काँग्रेसबाट प्रतिनिधी सभाका उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले विकास लहर काँग्रेस पार्टीले मात्र ल्याउने बताए । ‘अघिल्लो पटको निर्वाचनमा तपाइहरुले मलाई जिताउनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यस बेला संसद विकास कोषबाट यस क्षेत्रको विकास निमार्ण गरेको छु ।’ उनले भने, ‘तपाइहरुको समस्या मैले बुझेको छु । उनले पुन जिताउन आग्रह गरे ।